ပန်းကမ္ဘာ: October 2011
ဗြဟ္မာကျင့်စဉ် ဗြဟ္မာ့ဘုံအကြောင်းနှင့် ဆံတော်ပယ်ခြင်း မပယ်ခြင်း
အရှင်ဘုရား..၁။ ၃၁ ဘုံမှာ ဗြဟ္မာပြည်က အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါလျက် ဘာကြောင့် အရူပဗြဟ္မာဘုံ မှာ တရားနာလို့မရ၊ တရားထူးမရနိုင်တဲ့ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးထဲ ရောက်နေတာလဲဘုရား၊ ၂။ ဘုရားရှင်က ဆံတော်မပယ်ဘူး လို့ ကြားဖူးပါတယ်၊ .. ရဟန်းတွေကျတော့ ဘာလို့ပယ်ရတာလဲဘုရား၊ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပေးပါဘုရား။ မရတနာ (စင်္ကာပူ)
မေးခွန်း (၁) အနေနဲ့ လူတိုင်း ပါးစပ်ဖျားမှာ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး အကြောင်း ကြားဖူးနေကြတာ ကြာပါပြီ၊ အဲဒီထဲမှာ လူ့ပြည် ထက် မြတ်သော အသညသတ်ဗြဟ္မာ့ဘုံ တစ်ဘုံနှင့် အရူပ ဗြဟ္မာ(၄) ဘုံများ လဲ ပါဝင်နေပါတယ်၊ မေးခွန်းရှင်က ဒီသဘောကို ရည်ရွယ်မေးတာ ထင်ပါရဲ့၊ ဒါကြောင့် ဗြဟ္မာ့ဘုံများအကြောင်း၊ ဗြဟ္မာဖြစ် ကြောင်း ကျင့်စဉ်များစသည်ကို လက်လှမ်း မှီသလောက် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ အသညသတ်ဗြဟ္မာများ အကြောင်း နှင့် ကျင့်စဉ်
အသည- သညာစေတသိက် မရှိသော(တကယ်က နာမ်ဝိဥာဉ်ကောင်၊ လိပ်ပြာကောင် spirit or soul ဟု လူတိုင်း သိထားကြသော စိတ်များ၊ စေတသိက်များ အားလုံးမရှိပါဘဲ သညာ တမျိုးကိုသာ ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ အသညဟု ခေါ်ဝေါ် ကြသည့် ) သတ္တ - ဗြဟ္မာများ၊နားလည်လွယ်အောင် အဓိပ္ပါယ်ရှင်းပြရလျင် ဒီလူ့ဘ၀မှာ သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတမျိုးမျိုးကို အားထုတ်ကာ ပထမဈာန် ဒုတိယ ဈာန် စသဖြင့် ဈာန်အဆင့်ဆင့်ကို ရရှိပြီးသော သူတယောက်သည် အထက်ပိုင်း စတုတ္ထဈာန်အဆင့် ထိပ်ဆုံးအဆင့်ထိ ရောက်လာပြီ ဆိုလျင် လောကကြီးကိုငြီးငွေ့ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စသည်ဖြင့် ငြီးငွေ့စိတ်များ ဖြစ်လာတတ်သည်၊ ထိုအခါ ငြီးငွေ့ခြင်းရဲ့ လက်သည်တရားခံကို လိုက်ရှာရင်း လိုချင်တပ်မက်မှု တဏှာစိတ်ကြောင့် ဆိုတာကို သတိထားမိ တော့သည်။ သတ္တ၀ါတိုင်းမှာ လောဘစိတ် တဏှာစိတ် ရှိနေကြလို့သာ သံသရာလည်နေကြရတယ်၊ ဟိုဟာ လိုချင်၊ ဒီဟာ လိုချင် စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ လိုချင်တာကို ရအောင် အားထုတ်ရပြန်တယ်၊ အားထုတ်ကြရင်းနဲ့ အကုသိုလ်တွေ လုပ်မိကြ ပြန်တယ်၊ ဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်နေကြတာပဲ ဆိုတာကို တွေ့မြင်ကာ သံသရာလည်ခြင်း တရားခံက လောဘစိတ်ပဲ ဆိုတာ သိမြင်လာတာကြောင့် အဲဒီ နာမ်ဝိဥာဉ်စိတ်တွေ မရှိအောင် တောင့်တလာတယ်၊
တောင့်တတဲ့ အတိုင်း နာမ်တရား စိတ်တွေကို အပြစ်မြင်လာတယ်၊ မုန်းလာတယ်၊ နောက်တော့ မရှိအောင် ကြိုးစားတော့တယ်၊ ဒီအကြောင်းအရာတွေက အလွန်သိမ်မွေ့နက်နဲလေတော့ သမထ၊ ၀ိပဿနာတမျိုးမျိုးကို ကောင်းကောင်း အားထုတ်ဖူးသူမှ လမ်းစဉ်ကို နားလည် နိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများအတွက်တော့ မှန်းဆနားလည်ခြင်းဖြင့်သာ သိနိုင်ပါမည်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အားထုတ်ပြီး ဈာန်မလျောပဲ သေလွန်ရင် သူတောင့်တခဲ့တဲ့ အတိုင်း သညာစိတ် နာမ်တရားများ လုံးဝမရှိတဲ့ အသညသတ် ဗြဟ္မာ့ဘုံကို ရောက်ရတော့သည်၊ဈာန်တရား၏ အရှိန်အဟုန်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဗြဟ္မာ့ပြည် မှာ ရွှေတုံး ရွှေခဲကြီးတွေလို လှုပ်ရှားမှု မရှိတော့ဘူး၊ ငြိမ်သက်နေတယ်၊ ရုပ်တုကြီးတွေလို ဖြစ်နေကြတယ်၊ သက်မဲ့ရုပ်တုကြီးတွေထက် ထူးခြားပြီး ရုပ်ဇီဝိတ ဆိုတာတော့ ရှိနေသေးတယ်၊ အဘိဓမ္မာအကြောင်း နားလည်သူများတော့ သဘောပေါက်လွယ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် တရားနာခွင့်၊ ဘုရားဖူးခွင့် လုံးဝမရနိုင်ဘူးပေါ့။ ဈာန်အရှိန် မကုန်သေး သမျှ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှာ မလှုပ်မယှက် နေနေကြရ ပြီး သက်တမ်းက မဟာကပ်ကမ္ဘာပေါင်း (၅၀၀) ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်၊ လူ့ပြည်မှာ ဘုရားရှင်ပေါင်း ထောင် ဂဏန်း၊ သောင်းဂဏန်း ပွင့်နေပါစေ၊ သူတို့သက်တမ်းက မကုန်နိုင်သေးဘူး။ အခြားသော ဗြဟ္မာ့ဘုံများအကြောင်း တစ်ခြား ဗြဟ္မာများမှာတော့ ပုံမှန်ပဲ၊ ဈာန်ရအောင် ကျင့်ပြီး ပထမဈာန်ရပြီး ဈာန်မလျောပဲသေလွန် လျင် ပထမ ဈာန်ဗြဟ္မာ့ဘုံ များဖြစ်တဲ့ ဗြဟ္မာ့ပါရိသဇ္ဇာဘုံ၊ ဗြဟ္မာ့ပုရောဟိတာဘုံ၊ မဟာဗြဟ္မာဘုံအားဖြင့် တဘုံဘုံမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရော၊ ခံစားတတ်တဲ့နာမ် စိတ်ဝိဥာဉ်ရော နှစ်မျိုးလုံးပါတဲ့ဘုံကို ဘုံများကို ရောက်နိုင်ကြတယ်၊ ဒုတိယဈာန်ရပြီးသေလျင် ဒုတိယ ဈာန်ဘုံများဖြစ်တဲ့ ပရိတ္တာဘာ၊ အပ္ပမာဏာဘာ၊ အာဘဿရာဘုံစသည်ဖြင့်ရောက်ကြရတယ်၊ တတိယဈာန်ရထားလျင် တတိယဈာန်ဘုံများဖြစ်တဲ့ ပရိတ္တသုဘာ၊ အပ္ပမာဏသုဘာ၊ သုဘကိဏှာဘုံအားဖြင့် တဘုံဘုံ ကို ရောက်နိုင်တယ်၊ အလွယ်မှတ်လိုရင်တော့ ကိုယ်ရရှိထားတဲ့ ဈာန်တွေ အဆင့်မြင့်လျင် မြင့်သလောက် ဘုံတွေလဲ အမြင့် ကိုရောက်ကြရ၊ ခံစားကြရတယ်၊ သက်တမ်းတွေကလဲ အထက်ဘုံရောက်လေ ရှည်ကြာလေ၊ သက်တမ်းရှည်လေပါပဲ၊ အသညသတ် ဘုံကတော့ စတုတ္ထဈာန်အထိ ရရှိထားမှ ရောက်နိုင်ပါမယ်။ ဗြဟ္မာများ၏ ခန္ဓာကိုယ် ဗြဟ္မာများမှာ ယောကျားအင်္ဂါ၊ မိန်းမအင်္ဂါအားဖြင့် ကွဲပြားစွာ မပါတတ်တာ ထူးခြားချက်ပါ၊ ယောကျား လို့လဲ ခေါ်မရ၊ မိန်းမလို့လဲ မဆိုသာဘူးပေါ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ လူ့ဘ၀ကတည်းက ဈာန်တွေ အဘိဥာဉ်တွေ ရအောင် ကျင့်ပြီး သေခဲ့တာကြောင့် ကိလေသာစိတ်၊ တဏှာစိတ်တွေ ကင်းနေကြတယ်၊
ဗြဟ္မာဖြစ်ပြန်တော့လဲ ကိုယ်ရရှိပြီးသား ဈာန်တွေကို အမြဲ ၀င်စားပြီး အေးချမ်းစွာ နေလေ့ရှိကြတယ်၊ ကမ္ဘာပေါင်း၊ နှစ်သန်းပေါင်း များစွာ ဘယ်လောက်ကြာသည်ဖြစ်စေ ဈာန်ချမ်းသာခံစားပြီး အပူအပင်သောက ကင်းဝေးစွာနေလေ့ရှိကြ တယ်၊ လူတွေလို ကျင်ကြီး ကျင်ငယ် စွန့်တာတွေ ၊ ချွေးသလိပ်ထွက်တာတွေ၊ အစာရှာဖွေရတာတွေ ဘာမှ မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်လဲ ဗြဟ္မာဘ၀ကေ န သေလွန်ပြီး လူ့ပြည့်ရောက်လာသူဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဈာန်နဲ့ နေလာတာကြောင့် အထုံပါလာပြီး ကိလေသာစိတ်၊ တဏှာစိတ် ကုန်ခမ်းနေတတ်တယ်၊ အထုံပါလာတဲ့သဘောလို့ ဆိုရပါမယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့ဟာ သောတာပန် မဖြစ်သေးတာကြောင့် ဗြဟ္မာဘ၀သက်တမ်း၊ကုန်တာနဲ့ လူ့ပြည်လဲ ရောက်နိုင် တယ်၊ တိရိစ္ဆာန်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာမှ ဘ၀အာမခံချက် မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုနိင်ပါတယ်။ လူ့ဘ၀ကို ပြန်ဆင်း လာရင် အရင်ဘ၀က မိန်းမဖြစ်ခဲ့ရင် မိန်းမသားဘ၀ကိုပဲ ပြန်ရတတ်တယ်၊ ဘာကြောင့်ဆို သူက ဘ၀ချင်းနီးစပ်ခဲ့လေတော့ ဒီဘ၀ ကိုပဲ မှတ်မိပြီး ပြန်ရောက်ရတယ် လို့ သိရပါတယ်၊ ယောကျာ်းများမှာလည်း အတူတူလို့ ဆိုရပါမည်။ ရူပဗြဟ္မာ့အားလုံးမှာ ထူးခြားချက် (၃)မျိုးရှိတယ်၊ နှာခေါင်းတော့ ရှိတယ်၊ ဃာနပသာဒရုပ် မရှိတဲ့ အတွက် အနံ့ခံနိုင်စွမ်း မရှိကြဘူး၊ လျှာ ရှိပေမယ့် ဇိဝှါပသာဒရုပ်မရှိတဲ့အတွက် ဘာအရသာကိုမှ မခံစားနိုင်ဘူး၊ လူတွေရဲ့ လျာမှာ အရသာခံ အကြောပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် ရှိတယ်လို့ စာပေမှာ ဆိုထားတယ်၊ နောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ရှိနေပေမယ့် ကာယပသာဒရုပ် မရှိတဲ့အတွက် ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ အတွေ့အထိကို မခံစားတတ်ကြဘူး။ ဒီသုံးချက်က ဗြဟ္မာတိုင်းရဲ့ ထူးခြားချက်ပါပဲ။အခု အသညသတ်ဗြဟ္မာတွေမှာတော့ အထက်ပါ သုံးချက်အပြင် စောစောက နာမ်စိတ်spirit တွေပါ မရှိတဲ့အတွက် တရားကို ဘာမှ မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးမှာ ထည့်ရပါတယ်။
အရူပဗြဟ္မာများအကြောင်း ဒီဗြဟ္မာများကတော့ ပိုပြီး အဆင့်မြင့်သွားပါပြီ၊ အ- မရှိခြင်း၊ ရူပ -ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်။ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရရင် အံ့သြစရာ ကောင်းတာက သူတို့က အသညသတ်နဲ့ ပြောင်းပြန်ပေါ့၊ စိတ်ဝိဥာဉ်spirit or soul တော့ ရှိတယ်၊ mater ဆိုတဲ့ ရုပ်ခန္ဓာ ကိုယ်မရှိပြန်ဘူး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး မရှိမှတော့ ဘုရားကို ဘယ်လိုဖူးမလဲ၊ ဘုရားကို ဖူးမြင်ဖို့ မျက်စိကိုမရှိ၊ တရားနာဖို့ နားရွက်တွေ ၊ ဘာတွေ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး၊ တရားထူးရတယ် ဆိုတာ ဘုရားရှင်ကို တိုက်ရိုက် မဖူးမြင်ရတောင် သံဃာတော်များထံ၊ လူအချင်းချင်း၊ နတ်အချင်း ချင်း၊ ဗြဟ္မာအချင်းချင်း ဟောကြားတဲ့ တရားဒေသနာကို နာယူခွင့်ရရင်တောင် ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တယ်၊ ဒါကိုပဲ စာလိုကျတော့ ပရတောဃောသ ပစ္စယ လို့ ခေါ်ရတယ်ပေါ့၊ သူတပါးဆီက တရားစကား နာကြားခွင့်အကြောင်းကို ခန္ဓာကိုယ်ကြီး တောင် မရှိမှတော့ မျှော်လင့်ချက် မရှိနိုင်တော့ဘူး လို့ ဆိုရပါမယ်။ အရူပဗြဟ္မာဖြစ်ကြောင်း ကျင့်စဉ်
သူတို့လဲ သူတို့ကျင့်စဉ်အရ ဖြစ်ကြရတာပါ၊ ဒီဘက် လူ့ဘ၀မှာ စောစောကလို သာသနာပမှာဖြစ်စေ၊ သာသနာတွင်းမှာ ဖြစ်စေ ဈာန်တရားများ အားထုတ်ရင်း အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါ သူလဲပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အပြစ်မြင်လာတယ်၊ “ အော် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး ရှိနေလို့သာ ပူလို့မို့ အဲယားကွန်း ပန်ကာတွေလိုအပ်နေတာ၊ အအေးဒဏ်ခံရပြန်တော့ အနွေးထည်၊ စောင်၊ အပူပေးစက် ဟီတာ စသည်ဖြင့် ဒုက္ခများရပြန်တယ်၊ နာတာ၊ ကျင်တာ အောင့်တာ၊ ကိုက်တာ ခဲတာ၊ စသည်ဖြင့် ရောဂါမျိုးစုံ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုကိုလဲ ခံနေရတယ်၊ အိုနာသေ ဘေးတွေကိုလဲ မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး၊ ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီး မရှိရင် တော်တော် အေးချမ်းမှာပဲ ” လို့ တွေးပြီး အပြစ်မြင်လာပါရော၊
ဒီတော့ တရားခံက ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲ လို့ သိတာနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ မလိုချင်တော့ဘူး၊ မတွယ်တာတော့ဘူး၊ ဒီခန္ဓာ ကိုယ်ကြီး မရအောင်သာ တောင့်တတော့တယ်၊ ဒီနေရာမှာ ဈာန်တရားကလဲ သမာပတ်ရှစ်ပါးထဲမှာ အမြင့်ဆုံးရောက်နေမှ စိတ်ကူးထား တဲ့အတိုင်း ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သာသနာပ ကာလမှာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားတွေကို မကြားဖူး၊ မနာဖူးကြလေတော့ ကိုယ်အား သန်ရာကို တွေးတော ကြံဆပြီး ကျင့်ကြံကြရာက လမ်းမှား ရောက်သွားတယ် လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူတောင့်တတဲ့အတိုင်း ဈာန်မလျောပဲ သေလွန်ရင် ရုပ်ခန္ဓာကိုယ် မရှိပဲ စိတ်ဝိဥာဉ် နာမ်တရားများသာ ရှိတဲ့ အထက်ဆုံး အရူပဘုံကို ရောက်ကြရတော့တယ်၊ လူ့ပြည်မှာ ဘုရားတစ်ဆူပွင့်တော်မူပြီ တဲ့၊ တရားဦးဟောကြား နေပြီတဲ့၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီ တဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်းစကားများကို သက်တမ်းရှည်ကြတဲ့ နတ်ဗြဟ္မာတစ်ချို့ ကြားသိကြရ ပါတယ်၊ သို့သော်လည်း သူတို့သက်တမ်းနဲ့ တွက်လေတော့ အခုခေတ်လို ပြောရရင် စက္ကန့်ပိုင်း၊ မိနစ်ပိုင်းမျှသာ အချိန်ကြာမြင့် လိုက်တာမို့ တော်တော်ကြီး ကံကောင်းမှ တရားနာယူခွင့် ဘုရားဖူးခွင့်ရနိုင်ကြမှာပါ၊ ဒါတောင်မှ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရော၊ နာမ်စိတ်တွေရော လူတွေလို နှစ်မျိုးစုံ ရှိကြတဲ့ နတ်ဗြဟ္မာများသာ အခွင့်အရေးရနိုင်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဤအချက်များကို ထောက်သောအားဖြင့် ရုပ်ခန္ဓာသာ ရှိ၍ နာမ်စိတ် မရှိသော အသညသတ် ဗြဟ္မာများအားလုံး နှင့်၊ နာမ်စိတ်သာ ရှိ၍ ရုပ်ခန္ဓာ လုံးဝမရှိသော အရူပဗြဟ္မာ့ဘုံ (၄) ဘုံ၊ စုစုပေါင်း ၅ ဘုံမှာ ရှိကြတဲ့ ဗြဟ္မာများကို ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးမှာ ထည့်သွင်း ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်း ၂ တွင်ပါသော ဆံတော်ပယ်ခြင်း မပယ်ခြင်း
ဘုရားရှင်တိုင်း၏ ထူးခြား ဆန်းကြယ်သော အံ့သြဖွယ်များ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိပါသည်၊ တစ်ချို့အကြောင်းအရာ များက တန်းခိုးအဘိဥာဏ် ကြောင့် ဖြစ်ရသလို တစ်ချို့ကတော့ သဘာဝဖြစ်စဉ်အားဖြင့် ဘ၀အဆက်ဆက် ပါရမီတော်များ ဖြည့် ဆည်းခဲ့မှုကြောင့် ဒီဘက် ဘုရားအလောင်းဘ၀၊ ဘုရားရှင်ဘ၀မှာ နောက်ဆုံးအကြိမ် အကျိုးပေးကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာပြရလျင် ဘုရားအလောင်း သိဒ္ဓတ္ထဘ၀တွင် ပညာမျိုးစုံကို ဘယ်ဆရာသမားဆီကမှ သင်ယူစရာမလိုပဲ တတ်ကျွမ်း ခြင်း၊ ဈာန်လေးပါးကို ဘ၀ပေါင်းများစွာ ၀င်စားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆရာမရှိပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ၀င်စားနိုင်ခြင်း၊ မွေးဖွားခါစမှာပင် ခြေလှမ်း(၇) လှမ်း လှမ်းကာ လောကမှာ ငါအမြတ်ဆုံး၊ အသာဆုံး၊ ဒီဘ၀ဟာ နောက်ဆုံးပဲ၊ နောက်ဘ၀မှာ ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်း ဆင်းရဲကို မခံစားရတော့ဘူး စသည်ဖြင့် စကားပြောခြင်း၊ လမ်းလျောက်ခြင်းစသော ထူးခြားအံ့ဖွယ်ရာများ၊ ဘုရားရှင်၏ ခန္ဓာကိုယ် တွင် ချွေးထွက်ခြင်း၊ သလိပ်ထွက်ခြင်း၊ ချေးညှော်များ မလိမ်းကပ်ပဲ အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းနေခြင်း စသည်များသည်လည်း အံ့သြစရာ များပင်ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းရှင် မေးထားသော အချက်တွင် ဘုရားရှင်အတွက် ဆံတော် ရိတ်ပယ်ရခြင်းသည် တောထွက်ခါစ တစ်ကြိမ်တည်း သာ ဖြတ်ပယ်ရသည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည် ဒီဘ၀မှာ ဧကန်စင်စစ် ဘုရားဖြစ်မည် သေချာပါမူ ငါ၏ဆံပင်သည် မြေပေါ်သို့ မကျပဲ ကောင်းကင်၌ တည်နေပါစေသား ဟု အဓိဋ္ဌာန်ကာ သန်လျက်ဖြင့် ဆံပင်ကို ဖြတ်ကာ မြှောက်လိုက် သည်တွင် တစုံ တယောက်က ဆွဲကိုင်ထားသကဲ့သို့ တည်နေသည်၊ ခေါင်းပေါ်တွင် လက်လေးသစ်လောက်သာ ကြွင်းကျန် ရစ်သည်၊ ထိုဆံပင်ကို ယခုအခါ တာဝတိံသာနတ်ပြည်တွင် စူဠာမဏိစေတီ အဖြစ် တည်ထားသည် ဟု ဆိုပါသည်။ တဆက်ထည်း တွင် သာမန်လူတို့လို မဟုတ်မူဘဲ ဘုရားဘ၀ဖြင့် (၄၅)နှစ်ပတ်လုံး စံနေသော်လည်း ဆံပင်များသည် ပိုပြီးတိုသွားခြင်း၊ ရှည်ထွက်လာခြင်း လုံးဝ မရှိခဲ့ပါ၊ ပုံမှန် လက်လေးသစ်အနေအထားဖြင့် သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပမာ တည်ရှိနေပါသည်၊ ဤသည်တို့ကား လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းတိတိ ပါရမီတော်တို့ကို ဖြည့်ဆည်းပူးခဲ့ သောကြောင့် ရရှိလာသော အကျိုးရလဒ်တခုအနေဖြင့်သာ မှတ်သား သင့်ကြောင်း ဖြေကြားလိုက်ပါသည်။ မေတ္တာဖြင့်အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A ( ပန်းကမ္ဘာ )Date.29.Oct.2011
ငါသည်…ပျိုခြင်း မမြဲ အိုခြင်း မြဲ၏၊သို့ဖြစ်၍သာ မအိုပါလို တောင်းဆုဆိုလည်း၊တောင်းတိုင်းမရ၊ အိုကြရ အနတ္တ ခန္ဓာကိုယ်။
ငါသည်…သာခြင်း မမြဲ နာခြင်း မြဲ၏၊သို့ဖြစ်၍သာ မနာပါလို တောင်းဆုဆိုလည်း၊တောင်းတိုင်းမရ နာကြရ၊အနတ္တ ခန္ဓာကိုယ်။
ငါသည်…နေခြင်း မမြဲ သေခြင်းမြဲ၏၊သို့ဖြစ်၍သာ မသေပါလို၊တောင်းဆု ဆိုလည်း၊တောင်းတိုင်းမရ သေကြရ၊အနတ္တ ခန္ဓာကိုယ်။ ဒါလေး ရွတ်ဆိုနေရင်း မရဏာနုဿတိဘာဝနာကို ပွားများပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ( ၁၆)နှစ်ကျော်က ဓမ္မကထိကအကျော် မြစကြာဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ လက္ခဏ၏ ဓမ္မကဗျာကို ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ at
ကျွန်တော်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတော်တော်များများက သေခြင်းတရားနှင့်ပတ်သက်တာတွေချည်းဖြစ်နေခဲ့တော့ ဒီတစ်ခါတော့ ရှင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောင်းရေးလိုက်အုံးမယ်လို့တွေးရင်း ဒီပို့စ်ကို အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ (ဘုန်းဘုန်း ပန်းကမ္ဘာ)(http://www.dhammayaungchi.com)မွေးနေ့အတွက်ရေးဖြစ်သွားပါတယ်။
လူတိုင်းအသက်ရှည်ရှည်နေချင်သလားလို့မေးကြည့်ရင် အားလုံးနီးပါးက နေချင်ကြတယ်လို့ပဲ ပြန်ဖြေကြမှာပါ။ ကိုယ့် မျက်စိရှေ့ မှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တွေးမိတာရှိပါတယ်။ မြန်မာ တွေပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ “ဘုန်းကြီးလို့ အသက်ရှည်တယ်” ဆိုတဲ့စကားပါ။ တချို့ က အသက် တော့ရှည်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကံနည်းပါးကြတော့ အသက်မွေးနေထိုင်ရတာ ခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲကြရတယ်။ တချို့ ကတော့ ဘုန်းကြီးပေမယ့် အသက်ကတော့ မရှည်ကြရှာဘူး။ များသောအားဖြင့် လူတော်တွေ၊ ပါရမီရှင်တွေ အတော်များ များ အဲဒီအမျိုးအစားထဲ ပါဝင်နေကြသလိုပဲ။ လူကောင်းတွေဆို စောစောစီးစီးသေလိုက်ကြတာ တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့။
ကျွန်တော်တွေးမိတာက ဘုန်းကြီးရုံ၊ အသက်ရှည်ရုံနှင့် လူတစ်ယောက်အတွက် ဘ၀မှာ အဓိပ္ပါယ်လုံလောက် ပြည့်စုံ ပြီလားဆိုတာပါဘဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အာဏာရှင်တချို့ ဆို အသက်တွေအရှည်ကြီးနေပြီး ဘုန်းကံတွေကလည်း ကြီးလိုက်ပါဘိသနဲ့။ သူတို့ဘ ၀တွေကိုပဲကိုယ်ကအားကျရတော့မလား။ တချို့ လည်း ငွေကြေးသြဇာတွေတော့ တောင့်တင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးက ချို့ တဲ့ပြီး လူတွေရဲ့ အပြုစုခံ အစောင့် ရှောက်ခံ အဖြစ်နှင့် အသက်တွေအရှည်ကြီးနေနေကြတာမျိုးတွေလည်း တွေ့မိတယ်။ သူတို့လိုမျိုးဆိုရင်ရော။
တချို့ လည်း အစစအရာရာပြည့်စုံ၊ ကျန်းမာရေးကလည်း ကောင်း၊ အသက်အရွယ်တွေကြီးရင့်တဲ့အချိန်အထိ အပျော်အပါး၊ အသောက်အစားတွေနှင့်ကာမဂုဏ်တွေနှင့်အဆီရစ်နေကြဆဲ။သူတို့ဘ၀လိုမျိုးရော။
ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကလူမျိုးတွေလို မွေးကတည်းက ဘ၀နှင့်အလုပ်ကို ထပ်တူပြုထားပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင် တော့တဲ့နေ့ ဟာသေတဲ့နေ့ပဲဆိုတာလိုမျိုးရော။ အသက်ရှည်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဘ၀ပုံစံမျိုးနေထိုင်ရှင်သန်မလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်မိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ Role Model တွေထဲအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ အဖွားကြီးသားအမိနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်နှ င့် ဆွေ မတော်၊ မျိုးမစပ်ပေမယ့် ဘယ်ဘ၀ကရေစက်တွေကြောင့်လည်း မသိ။ ကျွန်တော် နှင့် သူတို့ ဟာ မြေးအဖွားေ တွလိုမျိုး သံယောဇ ဉ်တွေနှင့်ချစ်ခင်ကြတယ်။
အမေလုပ်တဲ့ အဖွားက သီပေါမင်းပါတော်မူတဲ့နှစ်မှာမွေးပါတယ်။ သူအသက်ငယ်ငယ် အရွယ်ကောင်းတုန်းမှာပဲ ခင်ပွန်း ဆုံးပါးသွားပြီး သမီးတစ်ယောက်နှင့် ဘ၀ကို နှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ သမီးလုပ်တဲ့ အဖွားကလည်း သူ အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်မှာ ဖခင်ဆုံးသွားခဲ့တော့ အမေကို ပြုစုဖို့ အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စတွေကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်မှာ အမေဖြစ်သူ ဖွားဖွားကြီးက အသက် (၉၀) နားကပ်နေပြီ။ သမီးလုပ်တဲ့သူက (၇၀)ကျော်အရွယ်။
သမီးလုပ်တဲ့သူ အသက် (၄၀)အရွယ်လောက်မှာပဲ သားအမိနှစ်ယောက်လုံး တရားအလုပ်ကို ဇောက်ချအားထုတ်ခဲ့ကြ တော့တယ်။ ဒီလိုနှင့် နောက်ပိုင်းတော့ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေ အားလုံးရောင်းချပစ်ပြီး ရိပ်သာတစ်ခုမှာ အပြီးနေ ထိုင်လိုက်ကြတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ သားအမိနှစ်ယောက်လုံးဟာ အသက်အရွယ်တွေသာကြီး ကြတယ်။ ကျန်းမာရေးက ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပါဘဲ။ ဘာရောဂါမှ ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး။ အစားဆို ဘာမှ ရှောင်နေ စရာမလိုဘူး။ နား၊ မျက်စိတွေ အားလုံးကောင်းတယ်။ သူတို့ကို စကားပြောရင် ပုံမှန်လေသံနှင့်ပဲပြောလို့ရတယ်။ မျက်စိ ကလည်း ဟိုးအဝေးကလာနေတဲ့သူ ဘယ်သူဆိုတာကို ကောင်းကောင်းမြင်တယ်။ သွားတွေအစုံမရှိတော့ပေမယ့် ထမင်း ကို ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်။ သူတို့သားအမိစားဖို့ ထမင်းဟင်းကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲချက်တယ်။
ဈေးကိုယ်တိုင် မသွားနိုင်ကြတော့လို့ သူများကို ဟင်းလျာမှာရပေမယ့် ချက်တာပြုတ်တာအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ကြတယ်။ အမေ လုပ်တဲ့ အဖွားက ကုလား ထိုင်တစ်လုံးမှာထိုင်ပြီး ဆေးပြင်းလိပ်ကြီးကိုခဲ၊ ကွမ်းကိုဝါးရင်း သတင်းစာဖတ်တယ်။ တခါတလေ ဟင်းချက်ေ နတဲ့သူ့သမီးကို လှမ်းပြီး ဟိုလိုချက်၊ ဒီလိုချက်ဆိုပြီး လှမ်းပြောလိုက်သေးတယ်။ သမီးလုပ်တဲ့ အဖွားက ထင်းမီးဖိုတစ်လုံးနှင့် ထမင်းဟင်း သူတို့နှစ်ယောက်စာချက်တယ်။
မနက်တိုင်း ရိပ်သာက ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ကိုယ်တော်တွေကို ဆွမ်းလောင်းလိုက်သေးတယ်။ အ၀တ်ကို သမီးလုပ်တဲ့သူက လျှော်တယ်။ သူ့အမေရေချိုးဖို့ ရေ သူကိုယ်တိုင်ခပ်တယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးတယ်။ အမေလုပ်တဲ့သူရဲ့  ဝေယျာ ၀စ္စအားလုံးကို သမီးအဖွားကြီးက အကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်။ သူတို့တွေမှာ ဆွေမျိုးတွေရှိပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ အကူအညီ မတောင်းဘူး။တခြားတစိမ်းဘယ်သူ့ကိုမှလည်းအကူအညီမတောင်းဘူး။
ဒီလိုနှင့် အမေလုပ်တဲ့ ဖွားဖွားက အသက်(၁၀၄)နှစ်မှာ လူကြီးရောဂါနှင့်ဆုံးပါတယ်။ လူကြီးရောဂါဆိုတာ အရင်က ကျွန်တော် ဘာမှန်းမသိဘူး။ အဲဒီအဖွားဆုံးမှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်။ ဘာရောဂါမှ မယ်မယ်ရရမရှိပါဘူး။ သက်တမ်းစေ့တော့ ဘယ်လိုမှခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေက ဆက်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ဆရာဝန်က ကျွန်တော့်ကို အဲဒီတုန်းက ပြောတာ မှတ်မိသေးတယ်။ အဖွားရဲ့  organs တွေအားလုံးက over ripe ဖြစ်နေပြီတဲ့။ ဘာမှ လုပ်ပေးလို့ မရတော့ဘူးတဲ့။ ဆုံးတဲ့အချိန်အထိ သတိတစ်ချက်မလွတ်ပါဘူး။ သူငယ်တစ်ချက်မပြန်ခဲ့ဘူး။ အားလုံးကိုသိတယ်။ မှတ်မိတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်။ အမေဆုံးသွားတော့ သမီးလုပ်တဲ့အဖွားက အဲဒီဇရပ်မှာပဲ သူတစ်ယောက်တည်း ဆက်နေတယ်။ အရင်အတိုင်းပဲ သူ့ထမင်းသူချက်၊ သူ့အ၀တ်သူလျှော်၊ နေ့စဉ်ဝတ္တရားမပျက် ဆွမ်းဝတ်မပျက် ပုံမှန်အတိုင်းပါဘဲ။ ကျွန်တော်သူ့ဆီ သွားလည်ရင် ကျွန်တော့်အတွက် သူကိုယ်တိုင် ကော်ဖီဖျော်တိုက်တယ်။ အသက် (၉၀)ကျော် အဖွားကြီးက ကျွန်တော့်ကို ကော်ဖီဖျော်တိုက်တာ ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတော့ ကျွန်တော်က မလုပ်ပါနှင့်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ရင် သူက ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေစမ်းပါ ဆိုပြီး ဟောက်တတ်တယ်။ သူလမ်းလျှောက်ရင် ဘေးကနေတွဲပေးတာကို မကြိုက်ဘူး။ သူ့တောင်ဝှေးနှင့်သူအားပြုပြီးလျှောက်တယ်။ အထိုင်အထ တွေမှာ သူများကို အားမကိုးချင်တော့ ကိုင်စရာရှိတဲ့ နံရံတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် တိုင်တစ်ခုခုဘေးမှာပဲ ရွေးပြီးထိုင်တယ်။ ထတဲ့အခါ အဲဒီ ကိုင်စရာ၊ ဒါမှမဟုတ် တိုင်ကို ကိုင်ပြီးထတယ်။ စကားပြောရင် အမြဲအားမာန်အပြည့်နှင့်ပြောတယ်။ တခါတလေစကားပြောနေရင်း လူတစ်ယောက်ယောက်နာမည် သူစဉ်းစားလို့မရတော့တဲ့အခါကျရင် “ဒီဦးနှောက်က လည်း မေ့တတ်လိုက်တာ” ဆိုပြီး အဲဒီနာမည်ကို မရ ရအောင် စဉ်းစားတယ်။ ဘုရားရှိခိုးစာတွေကို ကျွန်တော်ရွတ်ဖို့ဆိုပြီး သူကိုယ် တိုင်စာရွက်နှင့်ရေးပေးတာ လက်ရေးက ညီနေတာပဲ။ အသက် (၉၀) ကျော်ရဲ့ လက်ရေးပါလို့ ဘုရားစူးကြိမ်ပြောရမှာမျိုး။ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်း လန်းဆန်းနေတတ်တယ်။ ဒီလိုနှင့် အဲဒီဖွားဖွားလည်း အသက် (၁၀၀)ပြည့်တဲ့နှစ်မှာ လူကြီးရောဂါနှင့်ပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သူဆုံးခါနီး ရက်ပိုင်း လောက်အလိုမှပဲ တခြားလူရဲ့ အပြုအစုကို စပြီးခံပါတော့တယ်။ မခံလို့လဲမရတော့ဘူး။ အိပ်ယာထဲက မထနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားပြီကိုး။ သူ့နောက်ဆုံးကွယ်လွန်ချိန်အထိ သတိက အားကောင်းနေဆဲရှိတုန်းပါ။ ခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်း ကုန်လို့သာတစ်ဘ၀ကုန်လိုက်ရတဲ့သဘောပါပဲ။
သူတို့ သားအမိနှစ်ယောက်လုံးမှာ သီလလုံခြုံတာကတော့ အထင်အရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အမှတ်သတိအားကောင်း တာကတော့ သူတို့ အနှစ် (၆၀)ကျော် အားထုတ်ထားတဲ့ ၀ိပဿနာတရားရဲ့ ကျေးဇူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ သက်တမ်းစေ့နေသွားတာမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အားမကိုးခဲ့ဘူး။ ရုပ်ရော၊ စိတ်ရော မှာ အားမာန်တွေနှင့်။ တကယ့် အာဂအဖွားကြီး နှစ်ယောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း တကယ်လို့များ အသက်ရှည်ရှည် နေရမယ်ဆိုရင်ေ တာ့ဒီအဖွားနှစ်ေ ယာက် လိုမျိုးနေနိုင်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပါတယ်။
အသက်မသေနေဘူး၊ အသက်ရှူနေတာကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို ရှင်သန်နေပါတယ်လို့ ပြောလို့မရနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော် နားလည်မိပါတယ်။ ရှင်သန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က ပညာရှင်အသီးသီးက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုထားကြတာရှိသလို အနုပညာရှင်တွေကလည်း ရှင်သန်ခြင်းကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖွဲ့ဆိုရေးသားကြ၊ တင်ဆက်ကပြ ထားကြတာေ တွရှိပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနှင့်တွဲဖက်ပြီးဖွင့်ဆိုကြတယ်။ ကိုယ်ကျိုးမဖက် ပရဟိတလုပ်ငန်း တွေ လုပ်တာတွေနှင့် တွဲဖက်ပြီး ဖွင့်ဆိုကြတယ်။ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တာတွေနှင့် တွဲဖက်ပြီး ဖွင့်ဆိုကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ဆည်းကပ်ရာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရော ရှင်သန်ခြင်းကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုခဲ့ပါသလဲ။
အပ္ပမာဒေါ အမတပဒံ၊ ပမာဒေါ မစ္စုနော ပဒံ။
အပ္ပမတ္တာ န မီယန္တိ၊ ယေ ပမတ္တာ ယထာ မတာ။
လို့ဟောတော်မူထားပါတယ်။အဓိပ္ပါယ်က“မမေ့မလျော့ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်၏အကြောင်းတည်း၊ မေ့လျော့ခြင်းသည် သေခြင်း၏အကြောင်းတည်း၊ မမေ့မလျော့သောသူတို့သည် သေသည်မမည်ကုန်၊ မေ့လျော့သောသူတို့သည် သေ သည် မည်ကုန်၏။” တဲ့။
အသက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲရှည်ရှည်နေခွင့်ရနေပါစေ၊ သတိတရားမရှိပဲ နေနေကြမယ်ဆိုရင် ဒီလူရဲ့  ဘ၀ကို ရှင်သန်နေ တယ်လို့ ပြောလို့ လုံးဝမရနိုင်ဘူးဆိုတာကို မြတ်စွာဘုရားရှင်က အတိအလင်းဟောကြားထား ခဲ့တာပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ ရှင်သန်ခြင်းဖွင့်ဆိုချက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး မွေးတဲ့အချိန်ကစလို့ ယနေ့တိုင်အောင် နှစ်တွေဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းနေ ထိုင်ခဲ့ကြပြီး ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့တွေ တကယ်ရှင်သန်နေတာရောဟုတ်ရဲ့ လား၊ အသက်ရှင်လျက် သေနေကြတာများလား ဆိုတာကိုကတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲသိနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်မိကြောင်းပါခင်ဗျာ။ (ဘုန်းဘုန်းပန်းကမ္ဘာရဲ့  သက်တော် (၃၃)နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် သက်တမ်းပြည့် သက်တမ်းစေ့ ရှင်သန်နေ ထိုင်သွားနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်း ဒီပို့စ်ကို ရေးသားပူဇော်အပ်ပါတယ်ဘုရား။ )
သာသနာလှေကြီကို စီးနင်းလိုက်ပါ ရာမှာလှေကြုံစီးသူတွေများလာရင် စုပ်စုပ်မြုပ်သွားရန်မှာမကြာတော့ဘူးလို့ ဓမ္မာစရိယ ဦးဋ္ဌေးလှိုင်ရဲ့ဓမ္မဒူတ စာအုပ်ထဲမှတဆင့် သိရ မှတ်ရချိန်မှာ ကျွန်မသည် လည်း တတ်နိုင်သမျှ လှော်ခတ်သည့်တာဝန် ရယူ လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ များပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲဓမ္မဘလော့ဂါ သစ္စာအလင်း ရယ်လို့ ဖြစ်တည် ခဲ့ရတာပါ။ အခုဆို ၃နှစ်နီးပါး တောင်ကြာခဲ့ပါပြီ။
ဓမ္မစာပေပြန့်ပွား ရေးအတွက် အီလက်ထရာနစ် မြစ်ရေစီးကြောင်းမှာ လှော်ခတ် ခရီးနှင်ကြရင်း ကိုယ်တိုင် မျှဝေရုံသာမက သင်ယူမှုလည်းတိုးတက် ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဘုရားရှင် ရဲ့ တရားတော် များကို တိုက်ရိုက် သင်ကြား ၊သင်ယူ ခဲ့ကြသော သံဃာတော်များ ကတော့ သစ္စာအလင်း ရဲ့ အားကိုးခြင်းတည်ရာ…မေးမြန်းခြင်း တည်ရာ၊ သုတဘဏ်တိုက်များ သဖွယ် ပါပဲ။ စီဘောက်စ် မှာကျွန်မရဲ့ စာဖတ်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ခုခုရေးသားမေးမြန်းသွားတိုင်း ပြန်လည် ဖြေဆိုဘို့ ဓမ္မဘလော့ဂါဘုန်းဘုန်းများကို ချဉ်းကပ် ရပါတော့တယ်။သံဃာတော်ဘလော့ဂါများကတော့ တတ်နိုင်သမျှ ပဲ့ကိုင်ထိန်း ကျောင်း ပေးကြ မြဲမို့ အွန်လိုင်းရေစီးမှ သာသနာ့လှေကြီး ဆက်ပြီး ခရီးနှင်နေဆဲပါ။
ထိုထိုသော အရာများ ထဲ မှာ သံဃာတော်ဘလော့ဂါ ဘုန်းဘုန်းပန်းကမ္ဘာ လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်..။ ထိုစဉ်က ဘုန်းဘုန်း ဦးလောကနာထ ၊ဘုန်းဘုန်း တိက္ခဥာဏာ လင်္ကာရ ၊ ဘုန်းဘုန်း ပန်းကမ္ဘာ ၊ ကိုဝင်းမြင့် ၊မမေဟန်(သစ္စာတရား)၊ ဝိမုတ္တိသုခ ၊ ကိုအောင်ဦး(ဓမ္မရသ) ၊ ဖိုးသား(အဖြူရောင်မေတ္တာ)၊ နန်းထိုက်ဝင်း (အမောင်-ရေနံ့သာ) ၊ ကိုသုခ(သုခရိပ်) တို့ နဲ့ အတူအွန်လိုင်း ဓမ္မဆွေးနွေးပွဲ တွေ စီးဆင်း ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ရက်များကို ပြန်ပြောင်းလွမ်းဆွတ်မိပါသေးတယ်..။
ဒါကြောင့် မို့လည်း ဘုန်းဘုန်း အရှင် သုနန္ဒာလင်္ကာရ နဲ့ ဘုန်းဘုန်း အရှင်တိက္ခဥာဏာလင်္ကာရ တို့ ရဲ့ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ စိတ္တလတောင်ခြေ မှာ တရားအားထုတ်ကြတဲ့ အတွေ့အကြုံ ဟာ ကျွန်မ တို့ အားလုံးအတွက် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်စေရတာ အမှန်ပါပဲ။ဘုန်းဘုန်း နှစ်ပါး မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည် သီတင်းသုံးချိန်မှာ ကျွန်မသည်လည်းမြန်မာပြည်မှာနေထိုင်နေတာမို့ တွေ့ကြုံ နဲ့ တိုက်ဆိုင်ခဲ့သော်လည်း ဘုန်းဘုန်း အရှင်တိက္ခ ကိုသာ ဆွမ်းကပ်လှူခွင့် ကြုံဆုံ ခဲ့ပါတယ်..။ ပန်းကမ္ဘာ ဘုန်းဘုန်းတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကတရားစခန်းတွေမှာ တရားအားထုတ်နေပြီ ဆိုတဲ့သတင်း ကြား ရတော့ လှိုက်လှဲ ဝမ်းသာမှုဖြစ်ရပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်း ပန်းကမ္ဘာ နဲ့ မောင်လေးဝိမုတ္တိသုခ တို့ ဂျီတော့ မှတရား ဆွေးနွေးခန်း ကိုလည်း ဖတ်လိုက်ရတော့ ဘုန်းဘုန်း ရဲ့ ဖြည့်ဆည်းရင်း ၊မွမ်းမံရင်း သန့်စင် တိုက်ချွတ်ရင်း တောက်ပလာတဲ့ စရဏ တရားအတွက် ဦးညွှတ်ကန်တော့မိပါသေးတယ်။
ကျွန်မ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်စဉ်မှာတော့ ဘုန်းဘုန်းအရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ ကတော့ အွန်လိုင်း ထဲက သူ့ရဲ့ ပန်းကမ္ဘာ ထဲ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကာ ကျင်လည် မွှေးပျံ့နေတာမို့ ပြန်လည် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ပန်းကမ္ဘာ ထဲက ဓမ္မဆောင်းပါးတွေ ဟာ ရနံ့ လည်း စုံသလို မွှေးမွှေးပျံ့ ပျံ့ လှလှပပ အရောင်စုံ အသွေးစုံ ရနံ့ထုံ နေပါတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ မပြော လည်း စာဖတ်သူတွေသိနေကြပါပြီ။
ဘုန်းဘုန်း က မြန်မာ နိုင်ငံမှာ သီတင်းသုံး စဉ်မှာ ပရဟိတ လုပ်ငန်း တွေလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။မေမြို့ ကမျက်မမြင်ကျောင်း နဲ့ အတူ သီလသာဓိသိက္ခာ ကြီးမားသော မထေရ်ကြီးများ ထံ သွားရောက်ဖူး မျှော်ခြင်း ၊ တောရကျောင်းများ များသို့ လေ့လာ ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ က တော့ သဒ္ဓါပီတိ ဖြစ်စရာ ဓမ္မဆောင်းပါးတွေ အဖြစ် နေရာယူလာတာတွေ့နေရပါပြီ..။
စာသင်သား သံဃာတော်များ အတွက် ပိဋကတ်တော်များ ပရိယတ္တိ စာ အုပ်များကို နော်ဝေး မှ မမြကြေးမုံ တို့နှင့် အတူဆောင်ရွက်လှူဒါန်း ခဲ့ တာကိုသိရတော့လည်း ဘုန်းဘုန်းတို့ ရဲ့ ပန်းကမ္ဘာ ထဲက (ဓမ္မနန်းတော်) ကို လှမ်းမျှော်ကြည် ညို ဦး ခိုက်ရပါတယ်။
အခု တော့ ၂၆. ၁၀.၂၀၁၁ သည် ဘုန်းဘုန်းပန်းကမ္ဘာ ဖြစ်တည် မှုသည် ၃၃နှစ်မြောက် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဘုန်းဘုန်းရေ…အနောက်တိုင်းစကားပုံ တစ်ခုကြားဘူးတာကတော့ ခံယူချက်တူညီ လျှောက်လှမ်းတဲ့လမ်းတူညီနေတဲ့ နားလည်မှုပေး နိုင်မဲ့ လမ်းမှန် သို့ လမ်းပြ ပို့ဆောင်လမ်းညွှန် ပေးနိုင်မဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦး တစ်ယောက် ကိုယ့်မှာ ရှိခဲ့လျှင် သေခြင်းတရားကိုပင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ရဲပါသတဲ့..။မိတ်ဆွေ ရဲ့တန်ဘိုးက ကြီးမားလှသလို မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဘို့ဆိုတာ ကလည်း တိုက်ဆိုင် ဖြစ်တည်ဘို့ဆိုတာ လွယ်ကူသော ကိစ္စတစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါ။
ဂန္ထဓုရ ၊ ဝိပဿနာဓုရ လှော်တက် နှစ်ချောင်းလုံးကို ကိုင်ကာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှော်ခတ် နေတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့လို သံဃာတော် ဓမ္မမိတ်ဆွေကောင်း ရဘို့ ဆိုတာကလည်း ရတောင့်ရခဲ ဒုလ္လဘ တရားတစ်ခုဆိုတာ အသေအချာ သိလို့နေပါပြီ။ဘုန်းဘုန်း ရဲ့ ၃၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာမှ သည် ပြည့်ဝရင့်ကျက်တဲ့ အသိဥာဏ် စရဏ တရား နှင့် အတူ သာသနာ့လှေကြီးကို ဇွဲစိတ်သန်သန် လှော်ခတ်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလျက် ပူဇော် ကန်တော့အပ်ပါတယ်..။
စာကြွင်း။ ။ အမှတ်တရမွေးနေ့ဆောင်းပါးရေးပေးပါသော မသစ္စာအလင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ၊ စိတ္တလတောင်ခြေမှာ တရားအားထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ လေ့လာရေးခရီးပဲကြွဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ၀ါသနာအရ စာရေးနေတာမို့ တခါတလေမှာ မပြည့်မစုံဖြစ်တာမျိုး မှားယွင်းတာမျိုးတွေ့ရင် အမှားပြင်ဆင်ပြီး ဖြည့်စွက်နားလည်ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ၊ တခါတလေမှာတော့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး စာရေးသူရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်တာမို့ ရေးရတာ တွန်ဆုတ်နေမိတတ်ပြန်တယ်၊ စာရေးတယ်ဆိုတာ တခါတလေ ငါတွေ့တွေနဲ့ များသောအားဖြင့် ရှေးရှေးသော သူတော်ကောင်း တို့ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်လံလျောက်လှမ်းရတာမို့ စာတွေ့အားဖြင့် မျှဝေရတာမျိုးလဲ ရှိတတ်ပြန်တယ်၊ ကိုယ်ပိုင်လမ်းဆိုတာတော့ မရှိပါ၊ အဖမြတ်စွာရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ဖော်လိုလိုက်ကာ လျောက်လှမ်းခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဓမ္မအသိလေးတခု မျှဝေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီလေ ….
၁။ အို-ရမည့်ဘေး မရောက်သေး မျှော်တွေး ဆင်ခြင်ပါ၊မအို-သေးခင် တရားဝင် အဆင်ပြေလှသည်၊အိုသောခါတွင် တရားဝင် အဆင်မပြေပြီ၊အိုသောခါမှ တရားမရ မှားကြပါလိမ့်မည်။ ၂။ နာ-ရမည့်ဘေး မရောက်သေး မျှော်တွေးဆင်ခြင်ပါ၊မနာ-သေးခင် တရားဝင် အဆင်ပြေလှသည်၊နာသောခါတွင် တရားဝင် အဆင်မပြေပြီ၊နာသောခါမှ တရားမရ မှားကြပါလိမ့်မည်။
၃။ သေ-ရမည့်ဘေး မရောက်သေး မျှော်တွေး ဆင်ခြင်ပါ၊မသေ-သေးခင် တရားဝင် အဆင်ပြေလှသည်၊သေခါနီးတွင် တရားဝင် အဆင်မပြေပြီ၊သေခါနီးမှ တရားမရ မှားကြပါလိမ့်မည်။ ၄။ အို-နာ-သေရေး၊ ဒုက္ခဘေး၊ ငွေပေး မလွတ်ပြီ၊အိုဘေး နာဘေး သေဘေးရင်ဆိုင်၊ သမီးနှင့် သား ကုစားမနိုင်၊အမိ အဖ ရှိကလက်မှိုင်၊မဂ္ဂင်ပွား တရားသူကနိုင်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ဓမ္မသံဝေဂကဗျာကို အောက်တိုဘာ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် မိမိမွေးနေ့အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။ at
ငါတို့နေရာ ဒီကမ္ဘာ တဏှာ အုပ်စိုးသည်၊
တဏှာစေရာ မနေသာ ဖွေရှာဆက်ရသည်၊
ရသည့်ဥစ္စာ ချစ်သူပါ စွန့်ခွာသွားရမည်၊
တကယ့်အရေး တကယ်ဘေး ဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ပြီ၊
ငါနှင့်ရွယ်တူ ငါ့အောက်လူ ကြီးသူသေကြများလှပြီ၊
ခဏမစဲ အိုစမြဲ ကိုယ်လည်းသေဘက်နီးခဲ့ပြီ၊
ဇရာမီးတောင် ကိုယ်ထည်း(ထဲ)လောင် သေအောင်မြိုက်တော့သည်၊
မသေရခင် သွားလမ်းစဉ် ကြိုတင်ပြင်သင့်ပြီ၊
ဒါန သီလ ဘာဝနာ လမ်းသာ ထွင်လိမ့်မည်၊
မဂ္ဂင်ယာဉ်ကြီး အမြန်စီး ခရီးထွက်တော့မည် ။
( ၆ ) ကြိမ်မြောက် ပိဋကတ်ကျမ်းစာအုပ်များ လှူဒါန်းမှု မှတ်တမ်း
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (သီတင်းကျွတ်လ ) အတွက် ဓမ္မနန်းတော် မှ ဓမ္မစာအုပ်များ လစဉ်လှူဒါန်းမှု အစီအစဉ်ကို ဆက်လက် လှူဒါန်းဖြစ်တာကတော့ သံဃာ ( ၃၀၀ ) ကျော် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မြစကြာပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ရှိ သာသနာလင်္ကာရ သာမဏေကျော်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုနေကြဆဲဖြစ် သော ဒုတိယဆင့် တတိယဆင့် သံဃာတော် ( ၇၂ ) ပါး အတွက် စာအုပ် ရေ ( ၇၂ ) အုပ် ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဓမ္မကထိက ဆရာတော်များစွာကလဲ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်များ အစားအသောက် မပြည့်စုံမှု၊ အထူးသဖြင့် သံဃာဦးရေ များလွန်းသော စာသင်တိုက်ကြီးများတွင် ၀ါဆို ကထိန်အလှူပွဲများ မပြည့်စုံနိုင်မှု တို့ကို ထောက်ပြ ဟောပြကာ ရောက်လေရာ အရပ် တောရွာ မြို့ပေါ် စာသင်တိုက်များကို ပစ်ပယ်မထားကြဖို့၊ သံဃာငယ် ဦးဇင်းငယ် ကိုရင်ငယ်လေးများကို ပစ်ပယ်မထားကြဖို့ မနားတမ်း ဟောပြောနေကြတာကို ကြားမိတော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာရပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့တစ်ခုက သာသနာကို ဆွမ်းကွမ်းမှ စ၍ ကျောင်း အဆောက်အဦးအဆုံး လိုလေသေးမရှိ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေကြတာခေတ်အဆက်ဆက် မပြတ်သုဉ်းခဲ့ပါဘူး၊ စေတီ ကျောင်းကန် ဘုရား တန်ဆောင်း ဘယ်နေရာမှာမဆို လိုအပ်နေတာ သိလျင် အလိုလို အလှူရှင်ပေါ်လာပြီး ပြည့်စုံသွားတာတွေ မြင်တွေ့နေရပါတယ်၊ သို့သော် လည်း ရေပြည့်ပြီး သား အိုးတွေကို ပိုမိုကာ ထည့်ဖြည့်လိုတဲ့ စေတနာ သဒ္ဓါတရားများ ပြည့်စုံပြီးသား နေရာတွေကို လှူဒါန်းခြင်းအပါအ၀င် ပေါလျံနေတဲ့နေရာတွေကို တော့ ဥာဏ်ယှဉ်ကာ လှူဒါန်းဖို့ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂါတ်သာသနာရဲ့ အာဇာနည်လျောင်းလျာများ လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်များကိုလည်း တတ်စွမ်းသလောက် ထောက်ပံ့လှူနိုင်ကြစေဖို့ မေတ္တာစကားပါးလိုပါတယ်၊ တဆက်ထည်းမှာ မန္တလေးမြို့မှာ သီတင်းသုံး ခဲ့စဉ်က ရင်းနှီးတဲ့ ဒကာကြီးတဦးက လျောက်ထားတာကို သတိရမိတယ်၊ သူလျောက်ထားတာက -- တပည့်တော်တို့က လှူတာတော့ လှူပါတယ်ဘုရား၊ စွမ်းနိုင်သလောက် လှူနေသော်လည်း တခါတခါ လှူနေရင်းနဲ့ စေတနာတွေ သဒ္ဓါတရား တွေကို အရောင်ဆိုးခံလိုက်ရသလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ တွန့်တွန့်သွားမိတယ် ဘုရား တဲ့။ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ လို့ မေးမိတော့ . သံဃာတွေရဲ့ ချို့ယွင်းချက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ မဟုတ်တာ လုပ်တာတွေကို တွေ့ရမြင်ရ ကြားနေရတော့ စိတ်က ရာခိုင်နှုံးအပြည့် ကုသိုလ်စိတ်မထားနိုင်တော့ဘူး တဲ့။ သူ့စကားကို ကြားမိတော့ အလှူရှင်များရဲ့ စေတနာအား၊ သဒ္ဓါအားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာ နာလည်မိတယ်၊ နောက်မှာတော့ သူတပါးတွေ ဘယ်လို မကောင်းတာတွေ လုပ်နေပါစေ၊ သူ့လမ်း သူ သွားရမှာ၊ လျောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုယ်က လှူနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကို လှူပါတယ် ဆိုပြီး ပုဂ္ဂလိက အလှူကို အာရုံမပြုပဲ အရိယာ သံဃာတော်များစွာကို အာရုံပြုကာ သံဃိကဒါနအဖြစ် လှူပါတယ်လို့ အာရုံပြောင်းလိုက်ရင် မြင့်မြတ်တဲ့ သံဃိကအလှူ ဖြစ်သွားတာကြောင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုံး ကုသိုလ်ဖြစ် သွားပါလိမ့်မယ်လို့ အားပေးစကား ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ သာသနာ့ဘောင်ဆိုတာ ကြိုးတန်းပေါ် လမ်းလျှောက်ရသလို ပဲ၊ ကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်ရင် သံသရာ တဖက်ကမ်း ကို မြန်မြန်ရောက်နိုင်သလို မလျောက်နိုင်ရင်လဲ ချောက်ထဲ ကျနိုင်တယ် လို့ ရှေးပညာရှိများက ဆိုခဲ့ကြတယ်၊ နောက်တမျိုးက ဓားသွားပေါ်က ပျားရည်စက် နဲ့ ဥပမာပေးကြတယ်၊ ပျားရည်ရဲ့ ချိုမြိန်မှုကို သုံးဆောင်လိုရင် သတိမလွတ်စေနဲ့၊ သတိ လွတ်ရင် ဓားရှခံရမယ် လို့ ဆိုတယ်၊ ပျားရည် နဲ့ ဓားသွားကြားမှာ ခပ်ပါးပါးလေးပဲ ခြားနားနေပါသတဲ့။ ဒီအကြောင်း အရာလေးကို ပြောပြပြီး သူတို့လမ်းကြောင်း သူတို့သွားပါစေ၊ ကိုယ့်စိတ်ကို အရောင်ဆိုးမခံပါနဲ့၊ မညစ်ပေပါစေနဲ့ လို့အားပေးခဲ့ရတယ်။
အောက်တိုဘာ( သီတင်းကျွတ်လ )အတွက် ဓမ္မစာပေ အလှူရှင် ပုံမှန် လစဉ် အလှူရှင် ဒေါ်မြကြေးမုံ ( နော်ဝေ )မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ၏ အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကို ပူဇော်သောအားဖြင့် ပညာဒါန ပညာပါရမီဖြစ်စေရန် နိဗ္ဗာန်ရည် မှန်း လှူဒါန်းပါသည်။ လှူဒါန်းခဲ့သော စာအုပ်များ စာရင်း
၁။ ပါစိတ်ပါဠိတော် တအုပ်ကို ၅၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် ၃ အုပ် ၁၆၅၀၀ ကျပ်၊၂။ ပါစိတျာဒိ အဋ္ဌကထာ တအုပ် ၅၀၀၀ ဖြင့် ၅ အုပ် ၂၅၀၀၀ ကျပ်၊၃။ အဂုင်္တ္တရ ပါဠိတော် တတိယတွဲ တအုပ် ၅၅၀၀ ဖြင့် ၇ အုပ် ၃၈၅၀၀ ကျပ်၊
၄။ ပါရာဇိကဏ် ပါဠိတော် တအုပ် ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ၁၁ အုပ် ၅၅၀၀၀ ကျပ်၊၅။ အဂုင်္တ္တိုရ် အဋ္ဌကထာ ( ဒုတိယတွဲ )တအုပ် ၅၅၀၀ ဖြင့် ၄ အုပ် ၂၂၀၀၀ ကျပ်၊၆။ အဂုင်္တ္တိုရ် အဋ္ဌကထာ ( တတိယတွဲ ) တအုပ် ၅၀၀၀ ဖြင့် ၅ အုပ် ၂၅၀၀၀ ကျပ်၊၇။ အဂုင်္တ္တိုရ် ပါဠိတော် နိဿယ ( တတိယတွဲ ) တအုပ် ၅၅၀၀ ဖြင့် ၆ အုပ် ၃၃၀၀၀ ကျပ်၊
စာအုပ်ရေ ( ၄၁ )အုပ် အတွက် ကုန်ကျငွေ - ၂၁ ၅၀၀၀ ကျပ်၊ ( ၂ သိန်း ၁ သောင်း ၅ ထောင်ကျပ် )
၁။ ကင်္ခါပါဠိတော် တအုပ်ကို ၃၇၀၀ နှုံးဖြင့် ၈ အုပ် ၂၉၆၀၀ ကျပ်၊၂ ။ အဂုင်္တ္တိုရ် နိဿယ ပထမတွဲ တအုပ် ၅၅၀၀ ကျပ်၊ ၂ အုပ် ၁၁၀၀ ကျပ်၊၃။ အဂုင်္တ္တိုရ် နိဿယ စတုတ္ထတွဲ တအုပ် ၆၅၀၀ ကျပ်၊ ၅ အုပ် ၃၂၅၀၀ ကျပ်၊၄။ ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ (ဒုတိယတွဲ ) တအုပ် ၅၅၀၀၅။ ရဟန္တာ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ ၁ အုပ် ၇၀၀၀
၆။ ဓမ္မာစရိယ မျက်ရှု ၁ အုပ် ၇၀၀၀၇။ ရူပသိဒ္ဓိ ရှင်းတမ်း ၁ အုပ် ၆၀၀၀၈။ ဋီကာ ရှင်းတမ်း ( ပထမတွဲ ) တအုပ် ၅၀၀၀၉။ အဂုင်္တ္တိုရ် ဋီကာ ( တတိယအုပ် ) တအုပ် ၅၀၀၀
၁၀။ ဘာသာဋီကာ လမ်းညွှန် တအုပ်ကို ၇၀၀၀ ၂ အုပ် ၁၄၀၀၀ ကျပ်၊၁၁။ ဋီကာကျော် နိဿယ တအုပ်ကို ၄၇၀၀ ကျပ်၊ ၃ အုပ် ၁၄၁၀၀၁၂။ ၀ိဂ္ဂဟ မဉ္ဇူ တအုပ် ၄၅၀၀ ကျပ်၊ ၃ အုပ် ၁၃၅၀၀ ကျပ်၊၁၃။ သမန္တစက္ခုဒီပနီကျမ်း ၁ အုပ် ၈၀၀၀ ၁၄။ တစ်ဘ၀ သံသရာ ၁ အုပ် ၅၇၀၀
စာအုပ်ရေ ( ၃၁ ) အုပ် ၁၆၃ ၉၀၀ ကျပ် ( ၁ သိန်း ၆ သောင်း ၃ ထောင့် ၉ ရာကျပ် )
၁၅။ သံဃာတော်များ ဘုရားဝတ်တက် ၀တ်ကပ်ပြုရာ၊ စာဝါများပို့ချ သင်ယူရာ ဓမ္မာရုံကျောင်း တော်ကြီး တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ခြေသုတ်အခင်း ကော်ဇော ဆိုက်အကြီး ၁ ခုအတွက် ၁ သောင်း ၂၀၀၀ ကျပ်၊
လွှဲအပ်လှူဒါန်းငွေ - ၄ ၅၀၀၀၀ ကျပ်၊ ( ၄ သိန်း ၅ သောင်းကျပ် )သံဃာများအတွက် ကုန်ကျငွေ - ၃ ၈၀၀၀၀ ကျပ်၊ကော်ဇော လှူဒါန်းငွေ - ၁၂၀၀၀ ကျပ်၊စာအုပ်များအတွက် ကယ်ရီခ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ကြွင်းကျန်ငွေ - ၅၅၀၀၀ ကျပ်၊ ( ၅ သောင်း ၅ ထောင်ကျပ် )
စုစုပေါင်း ( ၃ သိန်း ၉ သောင်း ၅ ထောင်) ကျပ်တိတိ
ယခုအကြိမ် (၆) ကြိမ်မြောက် လှူဒါန်းမှုအတွက် ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ၊ ဘာသာဋီကာ၊ နိဿယ စသည်ဖြင့် အမျိုးပေါင်း စုံစုံလင်လင် နှင့် မျက်နှာဖုံး ဂျပ်ထူ အလှူရှင်ကမ္ဗည်းအပါအ၀င် စာအုပ်ရေ ( ၇၂ )အုပ် ကို လှူဒါန်း နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ လောက်ချာ စာရွက်နှစ်ရွက်အတိုင်း စာအုပ်စာရင်းကို ခွဲရေးလိုက်ပါသည်။ မြစကြာကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ သုံးထပ် အာစီ စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦးကြီးပါ၊ သံဃာများ အဖိတ် ဥပုသ် နားရက်များနှင့် ညနေပိုင်း ခဏတာတွင် မည်သူမဆို စာဖတ်လေ့လာနိုင်သည်။ ဒီလို စည်းကမ်းသေ၀ပ်တဲ့ သံဃာ့ပရိသတ်မျိုးကို မည်သူက မကြည်ညိုပဲ နေနိုင်ပါမလဲ လေ ..၀တ်ချရှိခိုးတော့လည်း ညီညီညာညာ လက်အုပ်ချီတော့လည်း ညီညီညာညာနဲ့ ကြည်နူးဝမ်းသာစရာ ကောင်းလှပါဘိသံဃာများအတွက် ဓမ္မာရုံကြီးမှာ အသုံးပြုရန် ခြေသုတ်အခင်း ကော်ဇော ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကို အားတက်သရော ကူညီ ပို့ပေးပါသော စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှ ညီငယ် အရှင်ဝိလာသ၊ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆရာကြီး ဒေါ်ဝိလာသီ နှင့် တပည့်များအားလုံးကို အလှူရှင်၏ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။ အားလုံးသော သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့အား ပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်အားလုံးအတွက် အမျှ အမျှပေးဝေပါသည်.. မေတ္တာဖြင့် အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A ( ပန်းကမ္ဘာ )Date. 24.Oct.2011
စာကြွင်း။ ။ဒီတကြိမ်မှာ မြစကြာပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်နဲ့ ပက်သက်သော အချက်အလက်များကို ( ၅ ) ကြိမ်မြောက် လှူဒါန်းမှု မှတ်တမ်းမှာ ရေးသားပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ပို့စ်ရှည်မှာ စိုးသည့်အတွက် မရေးဖြစ်တော့ပါ၊ ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာ ကြည် ညိုနိုင်ပါသည်။ at